သငျသညျအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲနေသည့်အချိန်တွင်သင်မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါ။ ကြက်သွန်နီ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ကျနော်တို့အားလုံးနီးပါးဟာနေကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်ဘယ်လိုရှည်လျားမသိရပါဘူးငါအရာထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့ရန်ကြိုးစားပေမယ့်ငါအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ပြက္ခဒိန်မှာကြည့်သောအခါငါသည်ဤရက်သတ္တပတ်ခဲ့ပုံကိုအံ့သြသွားသငျသညျမပြောနိုင် သြဂုတ်လမှတဆင့်လမ်း။ သြဂုတ်လ! သင်ကယုံကြည်နိုင်ပါသလား? ငါဆိုလိုတာ, ဒီမှာငါနွေရာသီရုံစတင်ခဲ့ကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီနှစ်ကုန်တွင်ပိတ်နေတဲ့အထဲကလှည့်တွေးခဲ့သည်! ငါကတကယ်သူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောသည်မှန်မှန်း: သင်သင်တို့သည်နောက်တဖန်ထိန်းချုပ်မှုမဆိုယောင်ရှိသည်သောကျော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတစ်ခုစွဲအစာကျွေးတိုင်းနှိုးနာရီဖြုန်းသည့်အခါအချိန်ပျံ။
အလေးအနက်ထားကရက်ပေါင်းသင်အမာခံ erotica မှာ gaping တိုင်းယခုအချိန်တွင်သုံးစွဲသူတစ်ဦးအာဏာမဲ့ကျွန်ဖြစ်လာပါတယ်သည့်အခါတက် သွား. ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော ဒါဟာသင်ကမျက်တောင်ခတ်တူရဲ့တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သို့လှည့်, အင်္ဂါနေ့သို့လှည့်, နှင့်သင်သင်သည်သင်၏မတရားဆန္ဒပြည့်များအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကို debasing အမျိုးသမီးများ၏ဗီဒီယိုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာကိုလောင်င့်ကိုသိလာမည့်အရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာရိတ္တပျက်ပြားမှုအတွက်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့နှင့်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှလေ့ကျင့်ခန်း ကြောင်းခြင်းမရှိတော့သငျသညျမဆိုစစ်မှန်သောအပျော်အပါးပေးသည်နှင့်ယခုတစ်ဗလာ, joyless မလှူထက်ပိုဘာမျှအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ထိုအခါနှစ်ပေါင်းတကယ်လည်းသင်တို့အပေါ်မှာတက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လို့ရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာသင်အွန်လိုင်း smut ၌သင်တို့၏ပေါ့ပေါ့အကျိုးစီးပွားသေးသင့်မိသားစုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးကိုဖကျြဆီးမရသည့်အတွက်ကျန်းမာ, ကောင်းစွာ-rounded ဘဝအသကျရှငျနေ, ပြီးတော့တစ်ဦးကို flash အတွက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလွန်ပြီအဲဒီမှာသင်သည်ခွငျး ထွက်ရှာကြံနှင့်ကင်မရာကိုအပေါ် masturbating အနိုင်နိုင် 18 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးမပြတ်မတောက် image ကိုစီးမှာစိုက်ကြည့်မှစွမ်းအင်အောင်စ။ ထိုအသင်ရုံ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်ရှိသည် "ဘယ်မှာအချိန်ကိုသွားရခဲ့တာလဲ"
ဒါဟာအားလုံးပဲဒါကြောင့်အစာရှောင်တွေ့ကြုံတတ်၏။ အဆိုပါရာသီပြောင်းလဲမှု, ယခုသင်တို့အသည်းအသန်တပ်မက်, နှင့်သင်သိမီ, သင့်ရဲ့ကလေးတွေအားလုံးတက်စိုက်ပျိုးနေသော ပို. ပို. ဂရပ်ဖစ်အုပ်စုလိုက်ပေါက်ကွဲသံကြီးရိုက်ကူးဘို့ subscription ကိုအခကြေးငွေနှင့်အတူပိတျဆို့နတေဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကြေညာချက်အရလစဉ်လတိုင်း, သင်အနည်းငယ်ထက် ပို. ရရှိပါသည် မီးခိုးရောင်ဆံပင်, သင် orifices နှင့် tanned ဇာတိပကတိအား gaping တစ်ဦးလွန်မိပြီ, ရောဂါဗေဒစုဆောင်းထက်အနည်းငယ်ပိုသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသွင်ပြောင်းပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒါဟာဘဝရဲ့ညာဘက်အားဖြင့်ပေါ်တွင်သင်ဖြတ်သန်းနေသည်နှင့်တူခံစားမိနိုငျပါသညျ! ကျွန်မဆိုလိုတဲ့နေ့, သူတို့သညျမီးနှင့်မိုက်တဲ့အခန်းအတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာအားဖြင့် huddling သည်အထိတစ်ဦးဗန်အတွက်စအိုလိင်ဆက်ဆံ nameless အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဆုံးမဲ့ချီတက်ပွဲကိုကြည့်အလုပ်လုပ်ရန်နေမကောင်းအတွက်တောင်းဆိုအကြား၌သာဤမျှလောက်များစွာသောနာရီ, အဲဒီမှာရုံ ISN ရှိပါတယ် '' န်းကျင်သွားကြဖို့အချိန်အလုံအလောက် T ။ တို့က tick လကျထကျ, အရက်သတ္တပတ်လအတွင်းသို့လှည့်နှင့်, သင်သည်သင်၏ခြေဆစ်မှာသင့်ရဲ့ဘောင်းဘီနှင့်အတူကြောက်မက်ဖွယ်, 36 နာရီအပျော်တမ်းမျက်နှာမူးရူး၏အလယ်တွင်ရှိကြ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးနောက်သင်ရသေးနောက်တဖန်သင်၏သမီးရဲ့မွေးနေ့ပါတီလက်လွတ်: သင်ကဖွစျနိုငျပုံကိုသိ နှင့်ချိတ်ကိုချွတ်ဖုန်း။
ဒါဟာတကယ်သင်ထင်စေသည်။ ထိုအခါမူကားသင်ပြန်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ညာဘက်ကိုသွားပါ။ ပြီးတော့သင်အမြဲသင့်ရဲ့ chafed နှင့် embattled မအင်္ဂါထဲကနေရုံတစျခုထက်ပိုတင်းမာနေသုတ်ရည်လွှတ်များထံသွားရောက်ကာစည်းရုံးမျှော်လင့်, အဖန်ဖန်တဖန်တုံ, ချွတ်လူရှုပ်။ သင်ပင်နောက်ပိုင်းတွင်မှတ်မိမည်မဟုတ်ကြောင်းအခြား delirious porn bender အတွက်ကလစ်ပ် squirting BBW ၏ Xtube.com ရဲ့ကျယ်ပြန့်မော်ကွန်းတိုက်လောင်ကျွမ်းဖို့တစ်နည်းနည်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲပါတယ်ကြောင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်သည်မျက်ရည် convulsing ပါတယ်။
သငျသညျရှင်းလင်းပြတ်သား၏ All-လွန်း-ခဏရဖို့စီမံခန့်ခွဲကြဘူးသောအခါ, သငျသညျတစ်ခါတစ်ရံပင်သင်က Playboy အွန်လိုင်းပေါ်သူမ၏ရင်သား baring အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပထမဦးဆုံးအနိမ့် resolution ကို thumbnail ကိုအမှတ်မထင်ကတည်းကသင်တို့ဆီသို့ဖြစ်ပျက်ရဲ့အရာခပ်သိမ်းမအောက်မေ့နိုင်ပါ။ သေချာတာပေါ့, သငျသညျမျိုးကသင့်ရဲ့သုတ်ရည်-flecked Laptop ကိုဖွင့်ပါဝါမှ ယူ. အချိန်ထက်ကြီးမားသောပစ္စည်းပစ္စယ-သင့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာသင့်ရဲ့သနားစရာကြိုးစားမှုရှည်ကြာမြင့်ဘယ်တော့မှကြောင်းပုံဖော်နိုင်ပါတယ်, သင့်ကွာရှင်း-ပေမယ့်အခြားအရာအားလုံး browser ကို tabs များ့မှုန်ဝါးဖြစ်ပါသည် နှင့်ဆီးအရှေ့ဥရောပအမျိုးသမီးများ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feeds တွေကိုအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဆိုးဘဝကနေလျှပ်တစ်ပြက်ကဲ့သို့ခံစားရ။
ကတူသို့မဟုတ်မ, သင်ရုံခေတ္တနားပေါ်ဘဝကိုမထားနိုင်, ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နေရောင်နေရောင်ကိုသင်ဖြစ်ကြောင်းကို3မှာအိပ်ရာထဲကရှည်နှင့် mindlessly သောအင်တာနက်ကိုတောင်အရှိဆုံးညံ့သညျ့စင်္ကြံ sate မရှိတော့လုပ်နိုင်သူတွေကိုလိမ်အလိုဆန္ဒများကိုချွေးသိပ်ဖို့ feverish ကြိုးပမ်းမှုအတွက်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ထိ မိ. လဲပါလိမ့်မယ်, တည် ထား. , မည်, ထမြောက်ကြလိမ့်မည် ဒီကိစ္စကို၏တကယ်တော့ဒီဖြစ်ပါသည်: နေပါစေသင်ကနှေးကွေးဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်ဘယ်လို, အချိန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တည်ငြိမ်အရှိန်အဟုန်မှာပေါ်နိမ်ရောဓ, သငျနေတဲ့နဂါးဖြစ်ကြသည်။
ဒါပေမယ့်ဟေး, ထိုကြောင့်သွားမယ့်လမ်းကိုဖွင့်! သင် porn ကိုကြည့်ချင်, သင်သေဆုံး, နေထိုင်ကြသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်ပြန်စာအရေးအသားမှရလိမ့်မယ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး့တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးအဘို့, ဒါမကောင်းတဲ့သူကစောင့်ကြည့်ဖို့ချင်တယ်။ yeah ရုံစုံတွဲတစ်တွဲကိုမိနစ်ပဲအနည်းငယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချငြိမ်သက်ရန်။ သင်တို့သည်ဤမျှမြန်ဆန်စွာရှူရှိုက်မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ဗီဒီယိုများ။ တပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ကောင်းသော, ကောင်းသော, ယခုတပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆင်ပြေ, ကောင်းသော, yeah ။ အခုတော့တပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ လုံလောက်အောင်ကောင်းသော, အဘယ်သူမျှမမျှကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ တပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ တ Watch ။ ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းအလုံအလောက် loading မဟုတ်ပါဘူး။ သေရော! ဒါဟာ fuck ဆိုတဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူး! မစောင့်ပါ။ ဘုရားရေ။ ငါ့ကိုအကူအညီကိုကူညီကိုကူညီပါ။